Ukuzimisela: Ungabekezela kanjani lapho usukulungele ukuyeka (umsindo) - i-Afrikhepri Fondation
NgoMsombuluko, Novemba 23, 2020
Ukuzimisela: Ungabekezela Kanjani Uma Ukulungele Ukuyeka (Umsindo)
Ducwaningo lubonisa ukuthi ukuzimisela kuyindlela engcono kakhulu yokubikezela impumelelo kunanoma iyiphi enye into. Ikhono lokukhuthazela yize kunezingqinamba libaluleke ngaphezu kwe-IQ yakho, ubuntu bakho, noma ezinye izinto zangaphandle, ezinjengemfundo yakho noma imvelo yakho.
Ngibhale le ncwadi ukuhlola isihloko sokuzimisela ngokombono wesayensi ukwedlula izindaba ezijwayelekile zokuzithuthukisa. Nazi ezinye zezinto ozozifunda kule ncwadi:
Ucwaningo lwabaculi abadlala phambili, abasubathi, abalingisi nabadlali be-chess lungakufundisa kanjani ukuthola imiphumela nokuphikelela. Umkhuba omuhle kakhulu amahora ambalwa kakhulu kunalokho ongase ucabange.
Izindlela ezinhlanu ezivame kakhulu zokuzilimaza. Isikhathi esiningi, awazi nokuthi uchitha isikhathi esingakanani ngenxa yezinto ezinhlanu engikhuluma ngazo kule ncwadi.
Ngokwezifundo, lesi sici sihlotshaniswa kakhulu nokuzimisela nokuphikelela. Funda ukuthi kuyini nokuthi ungayithuthukisa kanjani ngezindlela ezinhlanu ezahlukene.
Imibuzo emihlanu ecabanga kabusha ukuqhubeka. Ngokuzibuza le mibuzo kuzosiza ukukhulisa umdlandla wakho lapho ususondele ekuyekeni.
Ukulalela abanye bekhononda kwenza ingxenye yobuchopho bakho inciphe futhi kuthinte amandla akho okubekezela lapho uhlulekile.
Akunasizathu sokuthi udele uma usebenza kumgomo ofanele. Thola ukuthi ungaqiniseka kanjani ukuthi ufinyelela izinhloso zakho. Khuphuka ikhasi uthenge incwadi manje.
Ukuzimisela: Ungabekezela Kanjani Uma Ukulungele Ukuyeka
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 5,46
Thenga i- € 5,46
Kugcine ukubuyekezwa ngoNovemba 22, 2020 5:47 PM
Umbonari uBaba Vanga uprofethe ukuthi uMongameli we-44 wase-US uzoba mnyama
Ukupholisa ingqondo, ukuphulukisa umzimba (Audio)